Tricks From Ciriiri ku saabsan sida loo Siidaayo Badbaarada xun
Baabuurta baarkinku waxay awood u leeyihiin inay saameyn ku yeeshaan xogta macluumaadka Google Analytics (GA), taas oo wax u dhimi doonta waxqabadka bogga internetka, kordhinta kharashka bogga internetka oo keenaya fikradaha been abuurka ah. Isticmaalayaasha intooda badan waxay aaminsanyihiin in gaadiidka baaskiilka aysan saameyn ku yeelan boggooda Hase yeeshee, daraasadihii dhowaa waxay muujinayaan in boqolkiiba lixdan bogagga ay la xiriiri karaan bots. Marka arrintan la eego, waa muhiim in la fahmo siyaabaha loo maro baaskiilada si ay u soo tebiyaan xogta saxda ah.
Qodobkan, Lisa Mitchell, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt , wuxuu sharxayaa hababka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo si loo ogaado khadka gaadiidka ee Google Analytics (GA) iyo sidoo kale hababka lagu tirtirayo bots by isticmaalka filtarrada iyo farsamooyinka kale ee la soo sheegay. Intaa waxaa dheer, hababka warshadaha muhiimka ah ee waa in la raaco shaashadaha GA waxaa laga wada hadlayaa.
Waa kuwan soo socda qodobbo muhiim ah oo lagu eegayo warbixinnada GA ee la xidhiidha liisaska:
Waqtiga celceliska muddada fadhiga
Ku dhawaad ​​boqolkiiba boqol gaadiidka cusub ee soo booqda.
Marka la eego qaybta "admin", user ayaa kantarooli karaa goobaha "aragtida" adiga oo eegaya sanduuqa si loo tirtiro bootayaasha la yaqaan. Khubarada internetku waxay ku talinayaan in dadka isticmaala ay tahay in ay dhisto aragti imtixaan ah marka hore si ay u arkaan natiijooyinka ay saameeyeen ka hor inta aysan codsan aragtida guud. Liiska Bandhigyada ABC / IAB ee Caalamiga ah iyo Xakamaynta Liiska Xaanshiyaha ayaa laga tirtiray bots oo aan laga helin goobaha dadweynaha.
Isticmaalka Wakiilda Macmiilka iyo IP Adrees
Ka saar baabuurta gawaarida
Dhaqamada kala duwan ee warshadaha ayaa la raaci karaa meel ka baxsan GA, tusaale ahaan adeegga CAPTCHA. Shirkad ahaan, Google waxay soo bandhigtay adeeg cusub oo CAPTCHA caan ah oo loo yaqaan "No CAPTCHA." Adeeggani wuxuu ogaan karaa dabeecadda aadanaha, sida isticmaalka jiirka iyo go'aan ka gaarista ficiladaas. Ku darida weedha ee sababaha caddayntu waa inaan loo adeegsanin dhacdadan. Markasta oo uu qofku booqdo bogga internetka markii ugu horeysay, adeegga "CAPTCHA" ayaa loo soo bandhigaa qofka isticmaala. Kadibna Google Analytics (GA) waa in la tuuraa kadib markii uu dhammaystiray adeegga CAPTCHA. Ugu dambeyntii, ka dib waxaa la samayn doonaa gundhiga fadhiga kadib marka la sameeyo nidaamka, waana inuu ka saaraa inta badan baabuurta baaskiilka ee galaya goobta. Nidaam dabagal ah ayaa la sameyn karaa iyada oo la soo bandhigayo foomka codsashada cinwaanada emailka laga soo galo dadka isticmaala si ay u diraan isku xidhiidhinta waxqabadka 24 saacadood gudahood Source .